एभिन्युज टेलिभिजनविगत तीस बर्ष दुई हजार बर्ष यताकै उष्ण - एभिन्युज टेलिभिजन
गृह पृष्‍ठ / अनौठो तर वास्तविकता
विगत तीस बर्ष दुई हजार बर्ष यताकै उष्ण
1 Chaitra 2075 Friday 10:04 pm प्रतिकृया दिनुहोस
नानजिङ: विगत ३० बर्षमा पृथ्वीको वातावरणमा दुई हजार बर्ष यताकै उच्च तातोेपन महशुस गरिएको चिनियाँ तथा अमेरिकी वैज्ञानिकको संयुक्त अनुसन्धानले जनाएको छ ।
मानवसिर्जित हरितगृह ग्यासको प्रभावका कारण पृथ्वीको तापमानमा पछिल्लो समय उच्च वृद्धि देखिएको अनुसन्धानले देखाएको हो ।
पानी र हावाले जम्मा गरेका तियानकाई तालका सतहका नमूना ९सेडिमेन्ट स्याम्पल०, जुन समुद्री सतहदेखि करिब चार हजार मिटरको उचाइमा रहेका छन्, ले दुई हजार बर्ष पहिलेको जलवायुबारेको तथ्याङ्क उजागर गरेको हो । उक्त नमूनाहरूलाई मानवीय गतिविधिले प्रभावित नगरेको र यसले हजारौँ बर्ष पहिलेको तापक्रमको उतार–चढावलाई मापन सम्भव भएको अनुसन्धान रिपोर्टमा दावी गरिएको छ ।
उच्च पहाडी वा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका हिसावले संवेदनशील मानिने अनुसन्धान समूहका सदस्य झाओ चेङले बताउनुभयो । “सोलार विकिरण तथा ज्वालामूखी गतिविधि जलवायु प्रभावका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहने गर्छन । तर बिसौँ शताब्दीको पछिल्लो पाँच दशकमा मानवविकास र उत्पत्तिसम्बन्धी गतिविधि तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारक बन्ने गरेका छन्,” उनले बताए ।
अनौठो तर वास्तविकता
सर्पका साथी यमलाल ! (भिडियो रिर्पोट)
चितवन : तपाई हामी धेरैलाई सर्प भन्ने वित्तिकै निकै डर लाग्छ । अझ आफ्नै अगाडि देखियो वा घरभित्र पस्यो भने ...
मूर्तिले दुध खाएपछि !
विरालो मार्ने चालकलाई जेल सजायको फैसला
एउटै टुना माछा रु ३४ करोड ७२ लाखमा बिक्री